Qalabka ragga | Ragga leh Qaabka (Bogga 2)
Waxaan kuu soo bandhigeynaa xulashada ugu fiican si aad isugu geyn karto ilaa seddex hilqad ee dhegaha iyo kala duwanaanshaha suuqa.
Rag badan ayaan ka maarmin ururinta xirmooyinka ay ku lebbistaan ​​dharka, maaddaama ay tahay wax aan la aqbali karin oo lagu xiranayo shaati iyo suud.
Sida loo xirto dharka isboortiga
Waqtiyadu way isbadaleen iyo qaabka ama gogosha dharka qurxoon iyo midka caadiga ah ee surwaalka oo leh shaati ama jaakad ...
Maxay yihiin noocyada saacadaha ugu fiican? Halkan waxaad ka ogaan kartaa soo saarayaasha saacadaha waaweyn, kuwa raaxada iyo kuwa la awoodi karo.
Raadi dhammaan waxa ku saabsan koofiyadaha ragga. Noocyada oo dhan, taariikhdooda iyo furayaasha lagu aqoonsado laguna xiro qaab.
Soo ogow qalabka ugufiican ee aad moodada u aadi karto, laga bilaabo koodhadhka xarkaha ilaa jijimooyinka xagaaga, iyada oo loo marayo siddooyin dhagaxyo leh.
Soo ogow noocyada kala duwan ee boorsooyinka ragga iyo sida ay ugu kala duwan yihiin: boorsooyinka garbaha, wadarta guud, boorsooyinka dhammaadka usbuuca iyo waxyaabo kale.
Xiriirinta qaanso-roobeedka ayaa ku jira mood ka badan sidii hore. Haddii aadan rabin inaad ka iibsato dukaanka, halkan waxaan kaa caawinaynaa sida loo sameeyo xarig qaanso. Soo gal oo wax baro!
Saacadaha moodada ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan oo lagu buuxiyo laguna go'aamiyo qaabkaaga. Ma rabtaa inaad ogaato waxay yihiin iyo astaamahooda? Halkan gal!
Daloolidda dhegtu waa dhammaystir aad u fiican. Immisa nooc ayaa jira, qaabkee ayaa ugu fiican ragga, iyo waxyaabaha ugu fiican.
Hilqadaha ragga ayaa marba marka ka dambaysa sii kordhaya. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la ogaado qaar ka mid ah tilmaamaha nadaafadda. Halkan ka baro dhammaan waxa ku saabsan.
Soo ogow faa iidooyinka boorsooyinka garbaha, waxa ay tahay inaad raadiso markii aad iibsaneysid mid iyo waxyaabo badan oo ku saabsan boorsadan wax ku oolka ah.
Ragga ganaaxa waa kaabayaal muhiim u ah dharka ragga. Halkee ka timid? Iyo waxa ka sarreeya oo dhan, sidee ayey isku-darka laalistayaasha ugu noqon karaan muuqaalkaaga?
Muraayadaha muraayadaha indhaha waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan uguna muhiimsan adduunka moodada. Iyagu waa kuwo wax ku ool ah oo lagama maarmaan u ah in indhaha laga ilaaliyo qorraxda, waxa ugu fiicanna waa inay jiraan xaddidnaan moodooyin ah.
Scarves leh qaabab caadi ah si qoortaada loogu diiriyo jiilaalkan
Waxaan kuu soo jeedineynaa lix qaab oo qadiimi ah oo loogu talagalay garbasaarahaaga xilliga jiilaalka. Mawduucyo xarrago leh, oo iswaafaqsan oo aan waligood ka bixin qaabka.
Fursadaha galoofyada iyo isbeddellada
Gacan-gashiyada xilliga qaboobaha, fikrado kala duwan. Xilliga dayrta-jiilaalka, waxaa jira moodallo iyo galoofisyo loogu talagalay dhammaan dhadhanka.
Weli waa kuwo hadda jira, qaabab kala duwan oo kala duwan, cabirro iyo midabbo leh. Waa maxay taariikhda koofiyaddu? Waxaan dib u eegis ku sameyn doonaa hoosta.
Haddii aad raadineyso koofiyado moodada ah sanadkaan 2017, waxaa jira noocyo badan oo aad kala dooran karto. Xilligan, waxaad ogaan kartaa koofiyadaha moodada ugu qosolka badan.
Muuqaalkaaga ku bixi lahjadda isboortiga ee qalabkan
Waxaan kuu soo jeedineynaa qaar ka mid ah qalabka isboortiga ugu fiican si aad u siiso muuqaalkaaga lahjadda isboortiga si moodada dayrta / jiilaalka.
Isweydaarsiga Armani wuxuu soo bandhigayaa saacidihiisa deyrta / jiilaalka
Fiiri ololaha cusub ee daawashada Isweydaarsiga Armani. Shirkaddu waxay u heellan tahay isku darka saacadaha caadiga ah iyo saacadaha casriga ah.
Xirmooyinka xirmooyinka si aad u siiso taabasho shakhsi ahaaneed muuqaalkaaga rasmiga ah
Waxaan kuu soo bandhigeynaa xulasho ka kooban qaar ka mid ah xirmooyinka ugu fiican ee xilligan, labadaba cad iyo ujeedooyin khiyaano leh.
Lix Agab oo Loo Baahan Yahay Si Loogu Tayeysto Muuqaalkaaga Dayrtaan
Waxaan kuu soo qaadaneynaa xulasho qaar ka mid ah qalabka ugu fiican ee leh appliques xilliga dayrta / jiilaalka. Xarkaha, jijimooyin, boorsooyin dhab ah iyo in ka badan!
Xirmooyinka Fanny, soo celinta qalabka ugu qabow
Shirkadaha moodada waxay doorteen dib u soo celinta mid ka mid ah qalabka ugu wakiilka badan 80s iyo 90s: baakadka fanny. Inkasta oo ay la soo noqdeen hawo cusboonaysiin ah.
Sidee loo diyaariyaa shandadaada safarka?
In kasta oo ay u muuqan karto wax fudud, markaad qorsheyneyso fasaxaaga waa inaad waxyaabo ku abaabusho shandadda safarkaaga. Shandadu way kala duwanaan kartaa cabirkeeda.
Muraayadaha casriga ah ee xagaaga 2017
Xagaagan 2017, muraayadaha indhaha ee gadaal gadaal ayaa xukuma, badankoodna midabada birta ah iyo cabirka indhaha soo jiidan kara. Ku habboon sida qalabka.
Dahabka ragga iyo agabyada ay xirtaan cimilada wanaagsan
Qalabka, dahabka iyo agabyada ayaa si kale u taabanaya xaaladdeena bulsheed, muuqaalkeena shaqsiyeed, ama xitaa xaaladdeena shucuur.
Guntinta xarkaha, oo ah arrin bilicsanaanta
Waxaa jira kuwa sheeganaya inay jiraan in kabadan 30 dariiq oo lagu xiro gunti. Mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ragga
6 qalab oo dharkaaga ka maqnaan kara
Waxaa jira noocyo badan oo dheeri ah, kuwaas oo, oo loo adeegsaday si qumman, u matali kara guusha ama guuldarada tacaburka cusub.
Noocyo badan ayaa jira sida ragga. Marka ay timaado ka fekerka qaanso xariga, badanaa ma sameeyo fikrado dhexdhexaad ah. Ama aad ayaad u jeceshahay, ama ma jecli gabi ahaanba.
Koofiyadaha leh motifyada waa isbeddel. Moodooyinkaani waxay taabtaan qaabab kala duwan, laga soo bilaabo minimalism ilaa bariga, iyaga oo dhex maraya xayawaanka.
Shan qalab oo cadaan ah si aad u iftiimiso muuqaalkaaga
Xulashada qalabyada cad si ay u siiso iftiinka muuqaalkaaga guga / xagaaga isla markaana kordhisa cusboonaysiinta guud ahaan.
Boorsooyinka daabacan ayaa ah qalab isku dhejinaya gugaaga muuqaalkiisa. Halkan ka hel sababaha ugu caansan xilligan.
Shan qalab si loogu dabaaldego imaatinka jawiga wanaagsan ee qaabka
Laga soo bilaabo muraayadaha indhaha ilaa sharaabaadyada. Waxaan kuu soo bandhigeynaa shan qalab oo muhiim ah si aad u wajahdo guga 2017 oo leh qaabka ugu badan.
Xulashada garbasaarada leh ujeeddooyin daabacan guga
Waxay keenaan dabeecad iyo qofnimo. Garbasaarrada daabacan waxay leeyihiin awood ay ku sarreyn karaan kor u qaadista ugu sarreysa muuqaal kasta oo ...
Muraayadaha waaweyn waxay qayb muhiim ah ka noqon doonaan bilicsanaanta xilliga qaboobaha / xagaaga. Kaabis leh vibes retro.
Ragga iyo digaagga, ama diidmo?
Ragga wata chokers-ka ayaa caan ku ah meelaha lagu ordo, in kasta oo aan weli dad badan lagu arkin wadada. Waa maxay fikraddaada ku saabsan qalabkan?
Muhiim ah. Qalabka muhiimka ah ee qeexaya qaabka deyrta-jiilaalka 2016/2017 (II)
Liiska saxda ah ee leh astaamaha muhiimka ah wuxuu calaamadeeyaa qaabkee xilligan dayrta 2016. Qaybtan waxaan uga hadlaynaa garbasaarta tartanta iyo boorsooyinka duffel.
Muxuu yahay suunka ugu fiican ee surwaal kasta?
Mid ka mid ah khaladaadka dharka ee ugu caansan waa xulashada suunka khaldan. Aad u ballaaran, aad u cidhiidhi ah, sidoo kale ...
Tobanka saacadood ee ugu fiican ee ka hooseeya 60 euro
Waxaan kuu soo bandhigeynaa xulashada toban saacadood oo caadi ah oo qiimahoodu ka hooseeyo 60 euro. Kala soocista curcurka waligeed si sahal ah looma heli karo.
Qalabka tayada leh wuxuu hayaa sirta xagaaga xarrago leh. Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loola dhaqmo si ay isbedel u sameeyaan.
Koofiyadaha dharka ah waxay si fiican ugu shaqeeyaan surwaal dhar ah, shaati iyo jaakado isboorti oo ay ugu mahadcelinayaan naqshadahooda quruxda badan.
Saacadaha cusub ee Klokut Watches waxay isku daraan khadka ugu dhow ee avant-garde iyo xarrago nordic design. Dhameystirka ugu fiican ee muuqaalka ugu badan !!
Jijimooyin xargaha, goorma ayay badan yihiin?
Waxaan ka hadleynaa jijimooyin xargaha ah, qalab xiise leh oo tiradooda, dhanka kale, ay tahay in la xakameeyo sababo bilicsanaanta iyo qaab ahaaneed awgood.
Sidee loo doortaa muraayado ku habboon wajigaaga?
Muraayadaha waa qalab soo kordheysa oo sii kordheysa, laakiin waqtiga la iibsanayo, saacado ayaa lumaya iyadoo la isku dayayo in la helo qaabka ugu habboon.
Waxaan jecel nahay inaan ka hadalno muraayadaha indhaha laakiin waa mid ka mid ah waxyaabaha aan ugu jecel nahay. Xilli ciyaareedkan isbeddelku wuu imanayaa ...
Bishii Juun ee la soo dhaafay, waxaan soo bandhignay xulashada muraayadaha casriga ah xagaaga 2014. Laakiin si aad dhab ahaan ugu sarreyso moodada, waa inaad heshaa nooc muraayadaha muraayadaha oo leh muraayadaha hufan.
Muraayadaha Muraayadaha Qalbiyada Chrome
Qaabkooda gaarka ah, muraayadaha muraayadaha ee Chrome Hearts lama dareemi karo kamana gaabin doonaan inay madax isu rogaan.
Boorsooyinka maqaarku waxay ku soo noqdeen moodada gugan
Ka dib boorsooyinka garabka, maanta waxaan soo bandhigeynaa xulasho noocyo kale oo boorsooyin ah xilliga gu'ga-xagaaga 2014. Kuwani waa moodello lagama maarmaan ah oo laga soo ururiyay dharka ragga ee ugu dambeeyay: boorsooyinka maqaarka.
10 bacaha safarka oo qumman inaad ku qaadato usbuuca
Haddii aadan wali tagin fasax, hubaal waxaad horeyba usameyneysaa fasax yar oo usbuuc dhammaad ah oo ...
Barbisio, koofiyadaha gacanta lagu sameeyo ee qaabka Talyaaniga
Shirkadda Talyaani ee Barbisio waxay soo saartaa koofiyadaha gacanta lagu sameeyo sida ku xusan khiyaanada awoowayaasha. Xilligan waxay soo jeedinayaan ururinta ay dhiirrigelisay Hamptons
Gugaan, iskudxi naftaada sharaabaadyo dhiiran
Calaamaddan guga-xagaaga 2013 waxay diirada saareysaa dareenkaaga muuqaalka sharaabaadyada sharad ku saabsan moodooyinka xiisaha leh, daabacadaha iyo midabada oo buuxa,
Waxaan u soo jeedineynaa shan blazers kaamil ah xilligan nuska ah. Shan kaftan oo isugu jira kun iyo hal ayaa u muuqda xagaagan gu'ga 2013
Muraayadaha ugu fiican nooca wajigaaga
Weli waxaad isweydiineysaa muraayadaha noocee ah ee ku habboon wajigaaga? Waxaan ku xallineynaa dhammaan shakigaaga ku jira sawir-gacmeedkan. The…
Boorsooyinka dhabarka, lagama maarmaanka u ah dharkayaga dharka
Shandaddu waa wehelkeena xiisaha leh. Dhexdeeda ayaan ku haysan karnaa wax kasta oo aan dooneyno, iyo waqtiyada sida ...
Guga-xagaaga 2013 waxay ku guuleysanaysaa koofiyado
xulasho leh noocyo kala duwan oo koofiyado loogu talagalay xilliga gu'ga-xagaaga 2013, laga bilaabo trilby, fedora, borsalino, panama ama brimmed
Qalabka Wardson & Co. oo leh shaabadda 'lagu sameeyay Spain'
Xulashada qaar ka mid ah qaybaha ay soo jeedisay shirkadda Isbaanishka ee ku takhasustay qalabka ragga Wardson & Co sida sharaabaadyada, garbasaarrada ...
Qalabka xiddigga ee guga: 'boorsada' retro 'ee ka timaadda Eastpack
Boorsooyinka cusub ee ka soo jeeda Eastpack ee guga-xagaaga 2013, boorsooyinka dib-u-celinta oo leh naqshad aad u taxaddar badan oo raaxo leh loo isticmaalo maalin kasta.
3 sababood oo loo qaato boorsada gacanta
Ma ka badan tahay boorso ama boorso garabka? Haddii xulashada la doortay ay tahay tan labaad, boorsooyinkan garabka ah ee caadiga ahi aad ayey u yar yihiin ...
3 saacadood oo u muuqda fudeydkooda, xulashadeena
Marar badan ayaan aad u dhib badanahay markaan doorano saacad. Waxaan raadineynaa heer farsamo sare ama naqshad ...
Shandadaha gacanta ee ragga… haa mise maya?
Waxaan hadda ku dhex nool nahay bulsho "aad u furan" waxyaabaha qaarkood oo kuwa kalena aad ugu xiran. Boorsooyinka gacanta, ee ...
Runtii in badan oo idinka mid ahi waxay maqlaan gabdho badan oo ka hadlaya bacaha shirkadda Ingiriiska laga leeyahay ee Mulberry taas oo moodada ...
Muraayadaha muraayadaha maqaarka lagu qaabeeyo ee Gucci
Waxaan ku aragnay usbuucii hore Muuqaalka Maanta oo waxaan idhi way i jirrabeen, iminkana way i raacaan ...
Maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay pantyhose-ka ragga, oo ah dhammaystir maalin kasta caan ka noqonaya horayna ugu soo kordhay Yurub iyo USA.
Jeansada Cad Ee Ragga - Ogow Sida iyo Goorta La Xidho
Ragga ma inay xidhaan surwaal cad? Denimku ma wax ragga u ah baa? Samee surwaalka cad ...
Muraayadaha Arnette, deyrta-qaboobaha 2010-2011
Dhamaadka xagaaga macnaheedu maaha joogsiga waxqabadkooda ee loogu talagalay noocyada muraayadaha indhaha. Ma jiraan wax intaa ka badan…
Samsonite wuxuu u dabaaldegayaa sanad-guuradiisa, sannadkan shandadaha halyeeyga ah iyo shirkadaha ka shaqeeya safarka ayaa u dabaaldegaya ...
Waxaan jeclahay neefsashada hawo nadiif ah, inbadan markay diirada saaraan ruxida, kacdoonka iyo si aan munaasab ahayn loogu tartamo shirqoolka ...
Haa, waan ogahay in muuqaalka ugu horreeya ee qaabkani uu dib u bilaabmayo ku dhowaad laba sano, laakiin waa intaas ...
Khadadka muraayadaha Tech, by Ray-Ban
Ray Ban wuxuu soo bandhigay khadkeeda cusub ee muraayadaha indhaha, Tech, oo ka kooban naqshado la xushay ...
Isbeddellada muraayadaha indhaha ragga (II)
Waxaan sii wadaynaa dib u eegista ku saabsan isbeddellada ugu waaweyn ee muraayadaha indhaha ragga oo aan arki doonno bilaha soo socda….
Pegase 50 by Louis Vuitton, tarooli xagaaga
Xagaaga, xitaa in ka badan sanadka intiisa kale, waa wakhti safar, oo haddii aan maalgashanno qayb ka mid ah waqtigeenna ...
Ururinta dahabka cusub ee Emporio Armani
Hagaag, jowharadaha waxa la dhaho jowharadu maahan, uguyaraan aniga, laakiin sidaas ayaa loogu dhawaaqay. Kiiska…